AmaProteas abuyise isithunzi evika ihlazo lokwehlulwa yi-Ireland
INingizimu Afrika izoya emidlalweni yeT20 ne-Ireland sesibuyile isithunzi sayo kulandela ukuwina umdlalo wosuku olulodwa wesithathu ngama-run angu-70, eThe Village, ngoLwesihlanu.
Ukuwina kwamaProteas kuchaza ukuthi uchungechunge lwemidlalo emithathu yosuku olulodwa luphele ngo 1-1. Umdlalo wokuqala awudlalwanga ngenxa yemvula, kanti owesibili uwinwe yi-Ireland ngama-run angu-43.
Imidlalo emithathu yeT20 izoqala ngoMsombuluko eThe Village ngo-5 ntambama. Owesibili ungoJulayi 22, eCivil Service Cricket Club, kanti owokugcina ungoJulayi 24 enkundleni efanayo.
Emdlalweni wangoLwesihlanu uTemba Bavuma (ukaputeni) uwine ithosi wakhetha ukubhetha kuqala. Kubukeka kube yisinqumo esihle lesi ngoba iNingizimu Afrika ibhethe kahle kakhulu yenza ama-run angu-346.
Bekubhoke uJanneman Malan ohlanganise ama-run angu-177 engaphumanga, noQuinton de Kock ophume esena-120. Iphendula i-Ireland iqale kahle kodwa kwabuye kwabheda phakathi ne-innings.
Igcine ikhishwe yonke isenze ama-run angu-276 kuma-over angu-47.1. Kubashwibi beNingizimu Afrika kudlale kahle u-Andile Phehlukwayo no-Anrich Nortje abathathe amawikhethi amathathu emunye.
FUNDA NALA: IBafana kusayihambela kahle kwiCosafa Cup, isifike kowamanqamu
Ukubambana ngo 1-1 kwala mazwe kusho ukuthi womabili athole amaphuzu angu-15 kwiWorld Cup Super League. UBavuma uyincomile kakhulu indlela abadlale ngayo yize egcizelele ukuthi bebefuna ukuwuqeda kancono umdlalo.
“Besidlala kahle kakhulu cisho umdlalo wonke, ukudlala kwethu bekukuhle saze safika kuma-over angu-10 kuya ku-15 okugcina kwi-innings yabo, lapho sithe ukwehla khona. Sidlale ngokulingana kule midlalo, okuyinto enhle kodwa akuyona indlela ebesifuna ukuqeda ngayo umdlalo,” kusho uBavuma.
Previous Previous post: UNgcobo uthi sebekubeke eceleni konke, sebebheke ukuqeda umsebenzi
Next Next post: USikhosana uyisibonelo esihle kwabeChiefs ababhekene nomqansa onzima